1 gore 10 ago #570 by harrislarry1946
Kwaziwa ................. Wati wambofunga kuita DC8 Download ??
1 gore 10 ago #571 by Gh0stRider203
zvino kuti yaizova inotapira. Kune vashoma ikoko, zvose freeware uye payware asi hongu mumwe kubva Rikoooo zvaizova zvakanaka
1 gore 10 ago #573 by harrislarry1946
Zvaizova kunyanya akanaka kana Zvakange zvakaitwa redhiyo basa iroro.
Ndinoita vazhinji zvinobhururuka wangu FS2004 mu IFR ezvinhu uye vanoda 757 kupemberera shanduro asi
haugoni kuisa redhiyo kumba pazuva ulkopuolella kana ILS ..... lottta zvakanaka kuti anoita.
Kana ivo kuita DC8 zvingava zvakanaka kuva rwakatambanudzwa shanduro.
1 gore 10 ago #578 by Gh0stRider203
Ndinowanzotaura kuita-refu dhonza mitoro saka ini chete kuita IFR iri kutora-kure / kumhara DAI ndichifanira. Handina nguva kugara imwe Monitor ATC. Tisingatauri dzimwe ndege angu kuti aita usiku hwose uye ini kinda kunakidzwa chinhu ichi kuzivikanwa hope zvino uye ipapo elnaz
Time chokusika peji: 0.488 mumasekonzi